Tag: ngwaahịa na-atụ aro | Martech Zone
Tag: ngwaahịa na-atụ aro
Ndị na-eji ekwentị mkpanaka eme ihe dị iche. Ka ndụ ha na-agagharị na ekwentị ha, ha na-asọba n'etiti ngwaọrụ, ọnọdụ, na ọwa. Ndị na-azụ ahịa na-atụ anya ka ụdị ndị ha na ha na-eso mgbe niile ma na-ebute ahụmịhe nke onwe gafee isi aka na dijitalụ aka. Ebumnuche MoEngage bụ inyere ụdị aka nyocha, nkewa, itinye aka ma hazie njem nke ndị na-ere ahịa. Nyocha MoEngage Nyochaa Ihe Omume Ndị Ahịa nke MoEngage nyere nyere aka maka ndị na-ere ahịa na ịdepụta njem ndị ahịa anyị
Wenezdee, Jenụwarị 25, 2017 Wenezdee, Jenụwarị 25, 2017 Douglas Karr
Ndị na-ere ahịa jikọtara ahụmịhe nkeonwe na mgbasa ozi ezubere iche nke ọma ebe ndị na-azụ ahịa jikọtara ahụmịhe ndị ahịa ha (CX) na nkwado na ịzụrụ ihe. N'ezie, 45% nke ndị na-azụ ahịa na-ebute ụzọ inwe ahụmịhe ahaziri iche maka nkwado mmekọrịta n'etiti ndị na-eme ahịa ma ọ bụ ịzụta usoro nkeonwe. Achọpụtala ọdịiche ahụ ma dezie ya n'ụzọ zuru ezu n'ọmụmụ ihe mba ụwa ọhụrụ site na InMoment, Ike nke Mmetụta na Nhazi onwe: Otu skpụrụ Ga-esi Ghọta ma Na-atụ Anya Ihe Ndị Ahịa Na-atụ Anya. Na mba ọ bụla e nyochara, ụdị na
Mgbe ndị na-ere ahịa na-atụle ịhazi azụmahịa e-commerce, ha na-ekwukarị banyere otu ma ọ bụ atụmatụ abụọ mana ha anaghị enwe ohere iji mepụta ahụmịhe ịzụ ahịa pụrụ iche na nke mmadụ iche maka onye ọbịa ha. Ndị na-ere ahịa ọnlaịnụ bụ ndị mejuputara atụmatụ 4 niile - dịka Disney, Uniqlo, Converse na O'Neill - na - ahụ nsonaazụ dị ịtụnanya: mmụba 70% na ntinye aka nke ndị ọbịa ecommerce 300% mmụba na ntinye ego site na ọchụchọ 26% abawanye na ntụgharị ntụgharị Ọ bụ ezie na nke ahụ dị ịtụnanya , ụlọ ọrụ na-akụ afọ n'ala
Na IRCE afọ a na Chicago, m gbara ajụjụ ọnụ David Brussin, bụ onye guzobere Monetate, ọ bụkwa mkparịta ụka na-enye nghọta banyere mgbanwe mgbanwe ndị ahịa na ahụmịhe ha na-atụ anya n'aka ndị na-ere ahịa na ntanetị na apụ. Ikpe maka ịhazi onwe ya na-esikwu ike, ọ nwere ike bụrụ na ọ rutere ebe nkwụsị. Monetate na-adịbeghị anya Ecommerce Quarterly akụkọ na-egosi na ibiaghachi udu elu, nkezi iji ụkpụrụ na-ala na akakabarede udu-anọgide na-ojuju.